Zekariya 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kunamata kwechokwadi kuchadzorerwa (1-21)
“Gomo reMiorivhi richatsemuka nepakati” (4)
“Pachava naJehovha mumwe chete, uye achava nezita rimwe chete” (9)
Denda richauya pavavengi vaJehovha (12-15)
Kuita Mutambo Wematumba (16-19)
Hari dzese dzekubikira dzichava tsvene kuna Jehovha (20, 21)
14 “Inzwa! Zuva racho riri kuuya, iro zuva raJehovha, vanhu pavachagovana zvinhu zvako* zvakapambwa vari mauri. 2 Ndichaunganidza marudzi ese kuti arwise Jerusarema; uye guta racho richatorwa, zvinhu zvichapambwa mudzimba, uye vakadzi vachabatwa chibharo. Hafu yevanhu vari muguta ichatapwa, asi vanhu vachasara havazobviswi muguta racho. 3 “Jehovha achabuda orwisa marudzi iwayo+ sezvaanoita pazuva rehondo.+ 4 Zuva iroro tsoka dzake dzichatsika muGomo reMiorivhi,+ iro rakatarisana neJerusarema kumabvazuva; uye Gomo reMiorivhi richatsemuka nepakati, kubva kumabvazuva kusvika kumavirira,* pova nemupata wakakura; uye hafu yegomo racho ichaenda kuchamhembe, imwe hafu yacho yoenda kumaodzanyemba. 5 Muchatizira mumupata wemakomo angu, nekuti mupata wemakomo acho uchasvika kuAzeri. Muchatotiza sezvamakaita pakaitika kudengenyeka kwenyika mumazuva aMambo Uziya weJudha.+ Jehovha Mwari wangu achauya, uye achange aine vatsvene vese.+ 6 “Zuva iroro hakuzovi nechiedza chinopenya;+ zvinhu zvichagwamba.* 7 Richava zuva rimwe chete rinozivikanwa seraJehovha.+ Harizovi nemasikati kana usiku; uye pachava nechiedza panguva yemanheru. 8 Zuva iroro, mvura mhenyu+ ichayerera ichibva muJerusarema,+ hafu yayo ichienda kugungwa rekumabvazuva*+ imwe hafu ichienda kugungwa rekumavirira.*+ Zvichaitika muzhizha nemuchando. 9 Uye Jehovha achava Mambo panyika yese.+ Zuva iroro pachava naJehovha mumwe chete,+ uye achava nezita rimwe chete.+ 10 “Nyika yacho yese ichaita seArabha,+ kubvira kuGebha+ kusvika kuRimoni+ iri kumaodzanyemba kweJerusarema; uye Jerusarema richamirazve munzvimbo yaraimbova, rogarwa,+ kubvira kuGedhi raBhenjamini+ kusvika kunzvimbo yeGedhi Rekutanga, kunosvika kuGedhi Repakona, uye kubvira kuShongwe yaHananeri+ kusvika kuzvisviniro zvewaini zvamambo. 11 Jerusarema richagarwa nevanhu; harizombopiwizve mutongo wekuparadzwa+ uye vanhu vachagara mariri vasina chekutya.+ 12 “Iri ndiro denda richashandiswa naJehovha kurova marudzi ese anorwisa Jerusarema:+ Nyama yavo ichaora vakamira, maziso avo achaorera mukati, uye rurimi rwemumwe nemumwe ruchaorera mukanwa. 13 “Zuva iroro Jehovha achaita kuti vavhiringidzike zvikuru; mumwe nemumwe achabata ruoko rweshamwari yake, uye vacharwisana vega.+ 14 Judha achavawo muhondo yacho kuJerusarema; uye pfuma yemarudzi ese akapoteredza ichaunganidzwa, iro goridhe nesirivha nenguo zvakawanda kwazvo.+ 15 “Uye denda rakafanana nairoro richauyawo pamabhiza, manyurusi, ngamera, madhongi, nezvipfuwo zvese zviri mumisasa yacho. 16 “Pamarudzi ese achauya kuzorwisa Jerusarema, munhu wese achasara achakwidza gore negore+ kunopfugamira* Mambo, iye Jehovha wemauto,+ uye kunoita Mutambo Wematumba.+ 17 Asi kana pamhuri dzese dzepanyika pakava neanotadza kuenda kuJerusarema kuti anopfugamira Mambo, iye Jehovha wemauto, haazonayisirwi mvura.+ 18 Kana vanhu vekuIjipiti vakasauya uye vakasapinda imomo, havazonayisirwi mvura. Asi vacharohwa nedenda rinotumwa naJehovha pamarudzi asingauyi kuMutambo Wematumba. 19 Aya ndiwo marangirwo achaitwa Ijipiti nemhaka yekutadza kwayo uye achaitwa marudzi ese asingauyi kuzoita Mutambo Wematumba. 20 “Zuva iroro mabhero emabhiza achanyorwa kuti ‘Utsvene ndehwaJehovha!’+ Uye hari dzekubikira*+ dziri muimba yaJehovha dzichaita sendiro+ dziri pamberi peatari. 21 Hari dzese dzekubikira dziri muJerusarema nemuJudha dzichava tsvene uye dzichava dzaJehovha wemauto, uye vese vachange vachibayira zvibayiro vachauya vobikira mune dzimwe dzacho. Zuva iroro muimba yaJehovha wemauto hamuzovizve nemuKenani.”*+
^ Kureva, guta riri kutaurwa muvhesi 2.
^ ChiHeb., “kugungwa.”
^ Kana kuti “zvichatadza kufamba,” zvichiita sezvaomeswa nechando.
^ Kana kuti “kunonamata.”
^ Kana kuti “hari dzekubikira dzine muromo muhombe.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “munhu anoita zvekutengesa.”